Uyongeza njani iArhente yakho kuLawulo kuLuhlu lwakho lweShishini kuGoogle | Martech Zone
Sisebenze nabathengi abaliqela apho iindwendwe zophendlo lwasekhaya zibalulekile ekufumaneni abathengi abatsha. Ngelixa sisebenza kwindawo yabo ukuqinisekisa ukuba ijolise kubume bendawo, kubalulekile ukuba sisebenze kubo Uluhlu lweShishini kuGoogle.
Kutheni kufuneka ugcine uLuhlu lweShishini kuGoogle
Iziphumo zamaphepha einjini yokukhangela zikaGoogle ziqhekeziwe zaza zangamalungu amathathu:
Izikhangiso zeGoogle -Inkampani ezibhida kwiindawo eziphambili zentengiso phezulu nasezantsi kwiphepha lokukhangela.
IPakethe yeMephu kaGoogle -Ukuba uGoogle uchonga indawo njengefanelekileyo kuphando, babonisa imephu enendawo yeendawo zamashishini.
Iziphumo zoPhando loMzimba Amaphepha ewebhusayithi kwiziphumo zokukhangela.
Yintoni iinkampani ezininzi ezingayiqondiyo kukuba inqanaba lakho kwipakethi yemephu ayinanto yakwenza nokusebenza kwewebhusayithi yakho. Unokubeka kwinqanaba, ubhale umxholo omangalisayo, sebenzela ukufumana amakhonkco kwizixhobo ezifanelekileyo ... kwaye ayizukuhambisa kwipakethi yemephu. Ipakethi yemephu ilawulwa ziinkampani ezinento yakutshanje, eyenzeka rhoqo kuluhlu lweShishini kuGoogle… ikakhulu uphononongo lwabo.
Kuyacaphukisa njengokugcina elinye ijelo lokuthengisa, oku kubaluleke kakhulu kwintengiso yendawo. Xa sisebenza nenkampani yasekhaya, kubalulekile ukuba siqinisekise ukuchaneka koluhlu lweShishini kuGoogle, siyigcine ihlaziywa, kwaye sicele uphononongo njengesiqhelo esiqhelekileyo kunye namaqela abo.
Uyongeza njani iArhente yakho kuLuhlu lwakho lweShishini kuGoogle
Umgaqo wokuba inkampani nganye mayime kuyo yeyakho yonke imithombo ebalulekileyo kwishishini labo- kubandakanya indawo yabo, iakhawunti yabo yokubamba, imizobo yabo… neeakhawunti zabo zentlalo kunye noluhlu. Ukuvumela iarhente okanye umntu wesithathu ukuba akhe kwaye alawule enye yezi zixhobo kukucela ingxaki.
Ndikhe ndasebenzela usomashishini wasekhaya ongakhange ayithathele ngqalelo le nto kwaye uneakhawunti ezininzi zeYouTube kunye nezinye iiakhawunti zentlalo angakwaziyo ukungena kuzo. Kuthathe iinyanga ukulandelela iikontraki ezindala kwaye zabenza ukuba badlulise ubunini beakhawunti babuyela kumnini. Nceda ungavumeli nabani na ongomnye ukuba abenazo ezi zinto zibaluleke kakhulu kwishishini lakho!
Ishishini likaGoogle lahlukile. UGoogle uya kuthi uqinisekise ishishini lakho ngenombolo yomnxeba okanye ngokuthumela ikhadi lokubhalisa kwidilesi yakho yokuthumela enekhowudi oza kuyifaka. Nje ukuba ubhalise ishishini lakho kwaye umiselwe njengomnini… emva koko unokongeza iarhente yakho okanye umcebisi ofuna ukwandisa nokulawula ijelo lakho.
Xa ufikelela kwiakhawunti yakho, ungaya kuBasebenzisi kwimenyu yasekhohlo, emva koko yongeza iarhente yakho okanye idilesi ye-imeyile yomcebisi ukubongeza kwiakhawunti. Qiniseka ukuba uzicwangcisile umlawuli, ayingumnini.
Unokuqaphela ezantsi iphepha ukuba kukho umnxeba oya kuwo Yongeza umphathi kwishishini lakho. Iya kuvela incoko efanayo yokongeza abasebenzisi ukulawula iphepha.
Kodwa iArhente yam nguMnini!
Ukuba iarhente yakho sele ingumniniyo, qinisekisa ukuba bongeza idilesi ye-imeyile engumnini webhizinisi lakho endaweni yoko. Nje ukuba loo mntu (okanye uluhlu lokuhambisa) amkele ubunini, nciphisa indima yearhente umlawuli. Sukuyibeka le nto kude kube ngomso… ubudlelwane obuninzi beshishini buhamba ngokungahambi kakuhle kwaye kubalulekile ukuba ungumnini woluhlu lwakho lweshishini.
Qiniseka ukuba ususa abasebenzisi emva kokuba Benziwe!
Njengoko kubalulekile ukongeza umsebenzisi, kubalulekile ukuba ususe ukufikelela xa ungasasebenzi nobo butyebi.
tags: yongeza iarhenteyongeza umsebenzisiIshishini kugoogleUluhlu lweshishini kuGoogleUluhlu lomsebenzisi kuGoogleUGoogle ishishini lamkwenziwa kanjanilawula ishishini kuGooglelawula uGoogle kwishishini lamumlawuliipakethe yemephuumniniinyoka